Coloradans March si ay u dalbadaan Jinsiyadda Dadka oo dhan iyo Caddaaladda Muhaajiriinta iyo Qaxootiga - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Coloradans March si ay u dalbadaan Jinsiyadda Dadka oo dhan iyo Caddaaladda Muhaajiriinta iyo Qaxootiga
Socodka taariikhiga ah iyo isu -soo -baxa Denver wuxuu ugu baaqi doonaa Koongareeska inuu ugu dambeyn wax ka qabto socdaalka kadib tobanaan sano oo wax -qabad la'aan ah.
Yaa: Xubnaha bulshada ee ka kala yimid gobolka oo dhan (Lamar, Grand Junction, Fort Morgan, Boulder, Aurora, Denver), Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado (CIRC), Guddiga Adeegga Asxaabta Mareykanka ee Colorado (AFSC), Ururka Xorriyadda Rayidka Mareykanka ee Colorado (ACLU) ), Isbahaysiga Dadka Colorado (COPA), United Farm Workers Foundation (UFWF)
Waa maxay: Ya Es Hora: Maarso Jinsiyadda: Socod balaaran oo dhex maraya badhtamaha Denver si loogu baaqo Congress -ka si loo abuuro waddo loo maro dhalashada malaayiin; Isu soo bax weyn ayaa raaci doona socodkii Xerada Auraria iyadoo khudbado ka jeedinayaan shaqsiyaadka sida tooska ah u saameeyay iyo sharci-dajiyayaasha gobolka ee Colorado, bandhigyada farshaxan-yahannada maxalliga ah, miisaska ururada maxalliga ah, rug caafimaad oo soo baxda oo leh tallaallada COVID-19, iyo iibiyeyaasha cuntada.
Goorma: Sabti, Sebtember 25, 2021. Dibadbaxayaashu waxay isugu imaan doonaan Viking Park 11 -ka subaxnimo iyagoo wata khudbado ay jeedinayaan shaqsiyaadka ay saamaysay. Maarso waxay bilaaban doontaa 12 -ka fiidnimo waxayna socon doontaa saacad. Maarso waxay ku dhammaan doontaa 1pm xarunta Auraria. Isu soo bax ayaa ka dhici doona Xarunta Auraria laga bilaabo 1 - 3 galabnimo
Xagee: Kulankii hore iyo isu soo baxii Viking Park: 2801 W 29th Ave, Denver. Maarso waxay ka socon doontaa Viking Park ilaa Speer Avenue ilaa Auraria Campus. Isu soo baxa ugu weyn wuxuu ka dhici doonaa Xarunta Auraria: Tivoli Quad.
Denver, CO - 25 -ka Sebtembar, hoggaamiyeyaasha bulshada iyo u -doodayaasha guud ee Colorado waxay hoggaamin doonaan socod taariikhi ah oo dhex maraya Denver si ay uga dalbadaan Congress -ka iyo Maamulka Biden inay u dhaqmaan sidii loo abuuri lahaa waddo loo maro muwaadinnimada malaayiin muhaajiriin ah oo aan sharci lahayn iyo inay ka dalbadaan dhammaan hoggaamiyeyaasha la doortay inay ka shaqeeyaan caddaaladda dhammaan ummadda muhaajiriinta iyo qaxootiga. In kasta oo xildhibaannada Dimuqraaddigu ay u dagaallamayaan inay ku daraan dariiqa muwaadinimada biilka dib -u -heshiisiinta miisaaniyadda ee Senate -ka, kumanaan qaxooti iyo magangelyo -doon ah oo ka yimid Haiti, Afgaanistaan, Bartamaha Ameerika, iyo adduunka intiisa kale ayaa sii wada inay nabadgelyo ka raadsadaan Mareykanka. Maamulka Biden wuxuu sii wadaa siyaasaddooda shakiga iyo qalbi -xumida leh ee xuduudda ee hoos timaada Title 42 wuxuuna kor u qaaday xarigga iyo masaafurinta halista ah ee kuwa nabadgelyo -doonka ah. Socodku wuxuu ku soo beegmayaa waqti xasaasi ah si loo dalbado waxqabad.
"Waxaan ugu baaqeynaa guurtidayada iyo wakiilladeena Colorado inay muujiyaan hoggaan iyo adkeysi, iyagoo la taagan Coloradans aan sharciyeysneyn iyo bulshadeena si loo hubiyo in Koongarasku uu maro waddada dhalashada sannadkan. Codbixiyeyaasha Colorado iyo sharci -dajiyayaasha gobolka ayaa gobolkeenna u beddelay mid ka mid ah kuwa loo dhan yahay ee dalka - waxaan idinka codsaneynaa inaad ku sii dagaallanto aragtidaas DC. ” Jordan Garcia oo ka tirsan Guddiga Adeegga Asxaabta ee Mareykanka ayaa sii wada, “Boqolaal xubnaheenna ah iyo kuwa ay jecel yihiin ayaa sidaas yeeli doona bisha Sabtida ee soo socota ee Denver si aad u hubiso inaad samayso. ”
“Sabtida, waxaan u socon doonnaa muwaadinnimada 11 milyan oo muhaajiriin ah oo aan sharci haysan, kuwa qaata DACA, kuwa haysta TPS, shaqaalaha beeraha, dadka LGBTQ ee ku xiran xarumaha xabsiyada, qaxootiga ka soo cararaya dagaalka iyo musiibada Afgaanistaan ​​iyo Haiti, dadka madow iyo bunni ee si aan xad lahayn loo xiray iyo xabsi ku jira, qoysaska aan heli karin daryeel caafimaad iyo shaqaale ay ku sugan yihiin xaalado shaqo oo ka baxsan bani'aadamnimada - muwaadinnimadu waa inay ahaataa dhammaan. Waxaan u socon doonnaa qof walba maxaa yeelay caddaaladda socdaalku waa caddaalad dhammaan, ”ayay tiri Lisa Duran, Agaasimaha Fulinta Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado (CIRC).
Socodku wuxuu ka bilaaban doonaa Viking Park (2801 W 29th Ave, Denver) wuxuuna ku sii socon doonaa Speer Avenue ilaa Auraria Campus ee Tivoli Quad. Xarunta Auraria, isu -soo -bax ballaaran ayaa ka dhici doona dadka ku hadla oo si toos ah u saameeya Colorado iyo sharci -dejiyayaasha gobolka oo ay ku jiraan Wakiilka Naquetta Ricks, iyo sidoo kale bandhigyo farshaxan oo ka socda bulshooyinka soo -galootiga kala duwan ee Colorado. Ururadu waxay sidoo kale goobjoog ka ahaan doonaan miiska saaran oo ay weheliyaan rug caafimaad oo soo baxaysa oo bixisa tallaalada COVID-19.